Ukukhiqizwa kwe-Biosynthetic of Human Milk Oligosaccharides - Hielscher Ultrasound Technology
I-biosynthesis ye-oligosaccharides yobisi lomuntu (i-HMOs) ngokusebenzisa ukuvutshelwa noma ukusabela kwe-enzymatic inqubo eyinkimbinkimbi, edla isikhathi futhi evame ukuthambisa. I-Ultrasonication ikhulisa ukudluliswa okuyisisekelo phakathi kwamafektri amancane namaseli kuvuselela ukukhula kwamaseli kanye nokuqina kokudla. Ngaleyo ndlela, i-sonication ikhulisa ukuvutshelwa nezinqubo zamakhemikhali we-bio-umphumela wokukhiqizwa okusheshayo futhi okusebenzayo kwamaHMOs.
Ubisi Lomuntu Oligosaccharides
Ama-oligosaccharides abantu ubisi lomuntu, abizwa nangokuthi ama-glycans obisi lomuntu, angama-molecule woshukela, ayingxenye yeqembu le-oligosaccharides. Izibonelo ezinhle kakhulu ze-HMO zifaka i-2'-fucosyllactose (2′-FL), i-lacto-N-neotetraose (LNnT), 3'-galactosyllactose (3)′-GL), ne-difucosyllactose (DFL).
Ngenkathi ubisi lwebele lomuntu lwenziwe ngezinto ezingaphezu kwe-150 ezahlukahlukene ze-HMO, kuphela i-2'-fucosyllactose (2'-FL) ne-lacto-N-neotetraose (LNnT) okwamanje ekhiqizwa ngokwezinga lokuhweba futhi isetshenziswa njengezithasiselo zokudla okunempilo kufomula yosana.
Ama-oligosaccharides wobisi lomuntu (ama-HMOs) ayaziwa ngokubaluleka kwawo kokudla kwezingane. Ama-oligosaccharides wobisi lomuntu ayindlela eyingqayizivele yezakhi zomzimba, ezisebenza njengama-prebiotic, ama-anti-adhesive antimicrobials, kanye nama-immunomodulators ngaphakathi kwezinsana zezinsana futhi anikela kakhulu ekukhuleni kobuchopho. Ama-HMO atholakala kuphela kubisi lwebele lomuntu; amanye amabele ezincelisayo (isib. inkomo, imbuzi, izimvu, ikamela njll) azinazo lezi zinhlobo ezithile ze-oligosaccharides.
Ama-oligosaccharides ebisi lomuntu ayingxenye yesithathu eqina kakhulu ebisini lomuntu, elingakhona kungaba yincithakalo noma emulsified noma emisiwe emanzini. I-Lactose namafutha acid yizinto eziningi ezinyusa kakhulu ezitholakala obisini lomuntu. Ama-HMO akhona ekuqoqweni kwama-35es angama-0.35-0.88 (9.9-24.9 g) / L. Cishe ama-oligosaccharides ahlukene wobuntu obuhlelekile. I-oligosaccharide evelele ku-80% yabo bonke abesifazane ingu-2′-fucosyllactose, okhona ubisi lwebele lomuntu ekuqoqweni okungaba ngu-2,5 g / L.
Njengoba ama-HMO engakagaywanga, awanikeleli kukhalori ekulweni. Njengoba zingama-carbohydrate angabonakali, zisebenza njengama-prebiotic futhi zikhiqizwa ngokukhethekile yi-microflora efiselekayo, ikakhulukazi i-bifidobacteria.
Izinzuzo Zezempilo ze-Human Milk Oligosaccharides (HMOs)
gqugquzela ukuthuthukiswa kwezinsana
zibalulekile ekuthuthukiseni ubuchopho
imiphumela emelana nokunamathela ethambekeni lesibeletho
isekela amasosha omzimba kubantu abadala
I I-Ultrasonic Processor UIP2000hdT yandisa ukudluliselwa kwenqwaba futhi isebenze amafektri weselula ukuthola okuphezulu kwama-molecule we-biosynthesized biological ezifana nama-HMOs
I-Biosynthesis ye-Human Milk Oligosaccharides
Amafemu weseli nezinhlelo ze-enzymatic / chemo-enzymatic ubuchwepheshe bamanje obusetshenziselwa ukwakheka kwamaHMOs. Ekukhiqizweni kwe-HMO ngezinga lezimboni, ukuqina kwama fektri amancane we cell, i-bio-chemical synthesis, kanye nokusabela okuhlukahlukene kwe-enzymatic kuyizindlela ezisebenzisekayo zokukhiqiza ze-HMO. Ngenxa yezizathu zezomnotho, i-bio-synthesis ngefektri yama-microbial cell njengamanje iyindlela kuphela esetshenziswa ezingeni lokukhiqiza lezimboni lama-HMOs.
Ukufakwa ngamandla kwe-HMOs usebenzisa iMicrobial Cell Factories
I-E.coli, Saccharomyces cerevisiae neLactococcus lactis zivame ukusetshenziswa amafektri amaseli asetshenziselwa ukwenziwa kwe-biio kwama-molecule webhayoloji afana nama-HMOs. I-Fermentation inqubo yokusebenzisa izinto eziphilayo usebenzisa izidalwa ezincanyana ukuguqula i-substrate ibe ngamamolekyuli abhekisiwe. Amafektri amaseli weMicrobial asebenzisa ushukela olula njenge-substrate, abawaguqula abe ama-HMOs. Njengoba ushukela olula (isib. I-lactose) uyisigcawu esinciphile, eshibhile, lokhu kugcina inqubo ye-bio-synthesis ingabizi.
Ukukhula kwesilinganiso sokukhula kanye ne-bioconversion kuthonywa ikakhulu ngokudluliselwa okuningi kwezakhi zomzimba (i-substrate) kuma-microorganisms. Izinga lokudlulisa isisindo yinto esemqoka ethinta ukwakheka komkhiqizo ngesikhathi sokuvutshelwa. I-Ultrasonication yaziwa kakhulu ukukhuthaza ukudluliselwa kwenqwaba.
Ngesikhathi sokuvutshelwa, izimo eziku-bioreactor kumele zigadwe ngaso sonke isikhathi futhi zilawulwe ukuze amaseli akhule ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuze akhiqize ama-biomolecule ahlosiwe (isb. Ama-oligosaccharides anjenge-HMOs; i-insulin; amaprotheni aphindaphindayo). Ngokwe-theoret, ukwakheka komkhiqizo kuqala lapho isiko leseli liqala ukukhula. Kodwa-ke ikakhulukazi kumaseli aguqulwe ngofuzo njengama-microorganisms enzelwe kuvame ukufakwa kamuva ngokungeza into yamakhemikhali ku-substrate, ekhulisa ukubonakaliswa kwe-biomolecule ekhonjiwe. Ama-bioreactor we-Ultrasonic (sono-bioreactor) angalawulwa ngokuqondile futhi avumele ukukhuthaza okuthile kwamagciwane. Lokhu kuphumela ekuthini kusheshiswe i-biosynthesis kanye nemikhiqizo ephakeme.
I-Ultrasonic lysis kanye nokukhishwa: Ukuqina kwe-HMO eyinkimbinkimbi kungakhawulelwa ngama-titmentation aphansi kanye nemikhiqizo esele ye-intracellular. I-Ultrasonic lysis kanye nokukhishwa kusetshenziselwa ukukhipha izinto ezi-intracellular ngaphambi kokuhlanza kanye nezinqubo zokusakazwa phansi.
I-Ultrasonically Phromotha Fermentation
Izinga lokukhula kwamagciwane anjenge-Escherichia coli, enjineli ye-E.coli, iSaccharomyces cerevisiae neLactococcus lactis kungasheshiswa ngokwandisa izinga lokudlulisa ngobuningi kanye nokuvunyelwa kwodonga lweselula ngokusebenzisa ukulawulwa okuphansi kwemvamisa. Njengenqubo yokucubungula emnene, engashisi kakhulu, i-ultrasonication isebenza ngokuqinile emikhawulweni emhlanjini we-Fermentation.
I-Acoustic Cavitation: Umgomo osebenzayo we-sonication usekelwe ku-acoustic cavitation. I-ultrasonic probe (sonotrode) imibhangqwana ephansi imvamisa ye-ultrasound d ibe phakathi. Amagagasi e-ultrasound ahamba ngemijikelezo edala ukushintshanisa imijikelezo ephezulu (ingcindezelo) / umfutho ophansi (okungajwayelekile). Ngokucindezela nokwelula uketshezi ekushintsheni kwemijikelezo, kuphakama amakamithi we-vacuum omzuzu. Lama-bubu amancane okugcoba akhula ngaphezu kwemijikelezo eminingana aze afinyelele ngosayizi lapho engeke akwazi ukudonsa amanye amandla. Kuleli phuzu lokukhula okuphezulu, i-vacuum bubble ifakwa ngobudlova futhi ikhiqize izimo zakhona ezibucayi, ezaziwa ngokuthi yi-phenomenon ye-cavitation. "Endaweni esishisayo" eseqeleni, kungabonakala ingcindezi ephezulu kanye nokuhlukahluka kwamazinga okushisa kanye namandla amadevu acishe afinyelela ku-280m / sec. Ngale miphumela ye-cavitational, ukudluliselwa okuphelele kwesisindo kanye ne-sonoporation (ukugcwaliswa kwezindonga zeseli nezitho zamangqamuzana) kutholakala. Izakhi zelensi elingaphansi zifakwe kuwo wonke amaseli aphilayo, ukuze amafektri weseli anondliwe kahle nokukhula kanye namazinga okuguqula asheshiswa. Ama-bioreactors we-Ultrasonic ayindlela elula elula kodwa ephumelela kakhulu yokucubungula i-biomass kwinqubo eyodwa ye-biosynthesis.
I-sonication elawulwa ngokufanele, enobumnene yaziwa kahle ukuze iqinise izinqubo zokuvutshelwa.
I-Sonication ithuthukisa "ukukhiqizwa kwama-bioprocesses amaningi abandakanya amaseli bukhoma ngokuthuthukiswa kokutholwa komhlaba, ukukhiqizwa okukhulayo noma ukukhula ngokwanda kwamaseli we-cell, kanye nokukhipha okunamandla kwezingxenye zeseli." (Naveena et al. 2015)
Funda kabanzi mayelana ne-Fermentation esisizwe ngosizo lwe-ultrasonical!
Izinzuzo ze-Ultrasonically Intensified Fermentation
Ukukhuthaza Okukhethekile Kweseli
I-Uptake ye-Substrate efakiwe
Kwengezwe Ukuqina Kweselula
Ukulungiselela kabusha okulula
I-Batch noma i-InIine Iyacubungula
UNaveena et al. (2015) ithole ukuthi ukuqiniswa kwe-ultrasonic kunikeza izinzuzo eziningana ngesikhathi se-bioprocessing, kufaka phakathi izindleko zokusebenza eziphansi kuqhathaniswa nezinye izindlela zokwengeza zokwelashwa, ukusebenziseka lula kanye nezidingo zamandla ezinesizotha.
Izinqubo zokufuthelisa zibandakanya ama-microorganisms aphilayo anjengebhaktheriya noma imvubelo, esebenza njengefektri yamaseli. Ngenkathi i-sonication isetshenziswa ukukhuthaza ukudluliselwa kwesisindo kanye nokwandisa ukukhula nokukhula kwama-microorganism, kubalulekile ukulawula ukuqina kwe-ultrasonic ngokuqondile ukuze ugweme ukubhujiswa kwezimboni zeseli.
I-Hielscher Ultrasonics inguchwepheshe ekwakheni, ekhiqizeni nasekusabalaliseni ama-ultrasonicators asebenza kakhulu, angalawulwa ngokuqondile futhi aqashwe ukuze kuqinisekiswe ukutholakala kwezithelo eziphakeme kakhulu.
Ukulawulwa kwenqubo akubalulekile kuphela ezithelweni eziphakeme nekhwalithi ephezulu, kepha kunika amandla ukuphinda futhi kabusha imiphumela. Ikakhulu uma kuziwa ekuvuseleleni amafektri amaseli, ukuguqulwa kwezimo ezithile zeselula kwamapharamitha we-sonication kubalulekile ukufezekisa isivuno esiphakeme nokuvikela ukonakaliswa kweselula. Ngakho-ke, wonke amamodeli wedijithali we-Hielscher ultrasonicators afakelwe isoftware ehlakaniphile, ekuvumela ukuthi ulungise, uqaphe, uphinde ubuyekeze nemingcele ye-sonication. Amapharamitha wenqubo we-Ultrasonic anjenge-amplitude, izinga lokushisa, ingcindezi, ubude besikhathi se-sonication, imijikelezo yomsebenzi, nokufakwa kwamandla kubalulekile ukukhuthaza ukukhiqizwa kwe-HMO nge-Fermentation.
Isoftware ehlakaniphile yama-Hielscher ultrasonicators aqopha ngokuzenzakalelayo wonke amapharamitha enqubo abalulekile ekhadini le-SD elihlanganisiwe. Ukuqoshwa kwedatha okuzenzakalelayo kwenqubo ye-sonication kuyisisekelo sokumiswa kwenqubo kanye nokuzalwa kabusha / ukuphindeka, okudingeka kuMikhuba Emisha Yokukhiqiza (GMP).
cascatrodeTM ku-ultrasonic flow cell reactionor
Ama-Ultrasonic Rectors for Fermentation
I-Hielscher inikezela ngamamodeli we-ultrasonic osayizi ahlukahlukene, ubude namajiyometri, angasetshenziselwa i-batch kanye nokwelashwa okuqhubekayo kokugeleza. Ama-reactors e-Ultrasonic, abizwa nangokuthi ama-sono-bioreactors, ayatholakala kunoma iyiphi ivolumu emboza i-bioprocessing ye-ultrasonic kusuka kumasampula amancane elebhu ukuya kumshini wokukhiqiza nowokuthengisa ngokuphelele.
Kuyaziwa ukuthi indawo ye-sonotrode ye-ultrasonic emkhunjini osabelayo inomthelela ekusakazweni kwe-cavitation kanye nokusakazwa kwe-micro ngaphakathi nendawo. I-Sonotrode ne-reactionor ye-ultrasonic kufanele ikhethwe ngokuya ngevolumu yokucubungula umhluzi weseli. Ngenkathi i-sonication ingenziwa nge-batch nangemodi eqhubekayo, ngoba ukukhiqizwa okuphezulu kuqukethe ukusetshenziswa kokufakwa kokugeleza okuqhubekayo kunconyiwe. Ukudlula esitokisini sokugeleza kwe-ultrasonic, wonke amaseli aphakathi kwesitokisi athole ukuvezwa okufanayo ku-sonication ukuqinisekisa ukwelashwa okusebenzayo kakhulu. I-Hielscher Ultrasonics ebanzi yezinhlobo zamandla we-ultrasonic kanye nokugeleza kweseli kuvumela ukubutha ukusetha okuhle kwe-bioprocessing ekahle.
Hielscher Ultrasonics – Ukusuka kuLab kuya Pilot Kuya Ekukhiqizweni
I-Hielscher Ultrasonics ifaka isikrini esigcwele semishini ye-ultrasonic enikela ngama-homogenisers aphethwe ngesandla we-Ultrason ukulungiselela ukulungiswa kwesampula kuma-bench-top kanye nezinhlelo zokushayela kanye namayunithi anamandla we-ultrasonic wezimboni acubungula kalula amaloli ngehora. Ukuba nezindlela eziguquguqukayo neziguquguqukayo ekufakweni nasekufakweni kwezinketho, ama-Hielscher ultrasonicators angahlanganiswa kalula kuzo zonke izinhlobo zama-batch reactors, ama-feed-batches noma ngokugeleza okuqhubekayo ngokuqhubekayo.
Izesekeli ezahlukahlukene kanye nezingxenye ezenziwe ngezifiso zivumela ukuguqulwa okuhle kokusetha kwakho kwe-ultrasonic kuzidingo zakho zenqubo.
Yakhelwe ukusebenza kwe-24/7 ngaphansi komthwalo ophelele kanye nomsebenzi osindayo ezimweni ezifunwayo, ama-Hielscher processors ultrasonic athembekile futhi adinga ukulungiswa okuphansi kuphela.
I-Biosynthesis isebenzisa ama-Cell Factories
Ifektri yeseli ye-microbial iyindlela ye-biioengineering, esebenzisa amaseli wegciwane njengendawo yokukhiqiza. Ngama-microbes anjiniyela wokushintsha izakhi zofuzo, i-DNA yezinto eziphilayo ezinjengebhaktheriya, imvubelo, isikhunta, amaseli we-mamalia, noma i-algae iguqulwe namagciwane abe amafektri weseli. Izimboni zamaseli zisetshenziselwa ukuguqula ama-substrates abe ngama-molecule abalulekile webhayoloji, asetshenziswa isib. Ekudleni, pharma, chemistry nasekukhiqizeni uphethiloli. Amasu ahlukahlukene we-biosynthesis esekwe efektri ahlose ukukhiqizwa kwama-metabolites endabuko, ukubonakaliswa kwemigudu ye-heterologous biosynthetic pathways, noma i-protein expression.
Izimboni zamaseli zingasetshenziselwa ukwengeza ama-metabolites endabuko, ukuveza izindlela ezithinta imvelo ezinhlobonhlobo, noma ukuveza amaprotheni.
I-Biosynthesis yama-metabolites endabuko
Ama-metabolites omdabu achazwa njengamamolekyuli emvelo, lawo amaseli asetshenziswa njengezimboni zamaseli akhiqiza ngokwemvelo. Amafektri amaseli akhiqiza la mamolekyuli omzimba kungaba nge-intracellularly noma ngento efihlekile. Lesi sakamuva siyathandwa njengoba kusiza ukuhlukaniswa kanye nokuhlanzwa kwezakhi ezihlosiwe. Izibonelo zama-metabolites abomdabu ama-amino nama-nucleic acids, ama-antibiotics, amavithamini, ama-enzyme, ama-bioactive compounds, namaprotheni akhiqizwa ezindleleni ze-anabolic zeseli.
IHeterologus Biosynthetic Pathways
Lapho uzama ukukhiqiza inhlanganisela ethokozisayo, esinye sezinqumo ezibaluleke kakhulu ukukhethwa komkhiqizi kumgcini wasendaweni, futhi wandise lo mnikazi, noma ukudluliselwa kwendlela eya komunye umgcini owaziwayo. Uma umnikazi wokuqala angakwazi ukuzivumelanisa nenqubo yokuvuselelwa kwezimboni, futhi azikho izingozi ezihlobene nempilo ngokwenza kanjalo (isib. Ukukhiqizwa kwemikhiqizo enobuthi), lokhu kungaba isu elithandwayo (njengoba bekunjalo ngesibonelo, ngepenicillin ). Kodwa-ke, ezimweni eziningi zanamuhla, amandla okusebenzisa ifektri ekhethwe ngabasebenza amaseli kanye nezinqubo zesikhulumi esihambisanayo-sikala ubunzima bokudlulisa indlela.
Ukuvezwa kwamaprotheni kungatholwa ngezindlela ezi-homologous and heterologous. Embhalweni owazuzayo, isakhi sofuzo esikhona ngokwemvelo emzimbeni siyachazwa. Ngalesi-over-expression, kukhiqizwa isivuno esiphakeme semolekyuli ethile yezinto eziphilayo. Ukuze kuvezwe ukuqondisisa okuthile, uhlobo oluthile lwedluliselwa lwenziwe kwiseli yomsizi lapho uhlobo lukhona khona ngokwemvelo. Kusetshenziswa ubuchwepheshe beselula nobuphinda ubuchwepheshe be-DNA, isakhi sofuzo sifakwa kwi-DNA yomsingathi ukuze ingqamuzana eliphethe likhiqize (amakhulu) amaprotheni ebelingeke likhiqize ngokwemvelo. Isisho samaphrotheni senziwa emikhakheni ehlukahlukene evela kumagciwane, isb. I-coli ne-Bacillis subtilis, i-yeast, isib, i-Klyuveromyces lactis, i-Pichia pastoris, i-S. cerevisiae, isikhunta esisetshenziswayo, isib. Njengo-A. niger, namaseli asuselwa ezintweni eziphilayo ezinhlobonhlobo ezifana njengezilwane ezincelisayo nezinambuzane. Amaprotheni angenangqondo anesifiso esikhulu kwezohwebo, kufaka phakathi ama-enzyme amaningi, ama-bio-pharmaceuticals ayinkimbinkimbi, izindlela zokuxilonga nezesayensi yokucwaninga. (cf. AM Davy et al. 2017)